नेपालमा थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपालमा थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
आज सेती प्रादेशिक अस्पताल, कोशी अस्पता र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान पतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार नयाँ संक्रमितमा बाँकेका २७, बैतडीका ४, सुर्खेतका ३, बर्दिया र झापाका १/१ जना रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पको निशानामा पत्रकार !
यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या ५ सय ८४ पुगेको छ । जसमध्ये ५ सय ५ पुरुष र ७९ महिला रहेका छन् ।
यसअघि आज बिहान ३२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
योसहित शनिबार मात्रै ६८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या ५ सय ८४ पुगेको छ ।
जसमध्ये ७० जना निको भएर घर फर्कंदा ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा २ पुरुष र १ महिला रहेका छन् ।
अहिलेसम्म कोरोनाबाट ४० जिल्ला प्रभावित भएका छन् ।